Uyihlaziya njani i-Samsung Galaxy Spica kwi-Android 2.1 | I-Androidsis
antocara | | Samsung, Tutorials, Iinguqulelo ze-Android
Njenge siphawule kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo sele kunokwenzeka hlaziya i-Samsung Galaxy Spica kwi-Android 2.1 Ngayo izuza izinto ezininzi ezinomdla kwaye itshintshe ngokupheleleyo imeko yangoku ye-Android. Umfundi wewebhu wenze uhlaziyo kwaye usenzele incwadana encinci malunga nendlela yokuhlaziya esi sixhobo kunye neengxaki azifumeneyo kunye nendlela yokuzisombulula.
Enkosi Obi_alm. Apha unamanyathelo awalandeleyo.
QAPHELA: Ukuhlaziywa kwiWindows XP kwaye kungeniswa simahla ngaphandle kweFrance (andazi ukuba le yokugqibela iya kuba nefuthe, emva koko ndihlaziye kuba uhlaziyo sele lufikile eFrance ...)
0. Gcina izinto onomdla kuzo (inkumbulo yangaphakathi iya kufomathwa, ulahlekelwe ziapps, njl. Ukuba abafowunelwa, njl., Unazo ezihambelana neakhawunti kaGoogle, akukho ngxaki. Ndikucebisa ukuba wenze uluhlu lweeapps ozifakileyo.
1. Khuphela uze ufake IPc Studio entsha 1.3 kwiwebhusayithi yeSamsung eSpain. Ndifundile ukuba kuyacetyiswa ukuba ukhiphe ezinye iinguqulelo kunye nabaqhubi ukuba sele unazo (khange kube njalo).
2. Beka iselfowuni kwimowudi yokususa i-USB ukuze ibone isixhobo: Useto -Izicelo-uPhuculo-lweUSB ukulungisa ingxaki.
3. Qala iPC Studio kwaye uqhagamshele iselfowuni.
4. Emva kokuqonda iselfowuni, cofa ku "Uhlaziyo" (mhlawumbi ndiza kukwazisa kungekudala emva kokuqhagamshela ukuba kukho uhlaziyo olukhoyo).
5. Siya kwithebhu yokuhlaziya isixhobo. Sikhetha isixhobo sethu, GT-i5700.
6. Ngoku iya kujonga uhlaziyo. Nje ukuba ufumaneke, uyayamkela.
7. Ukuba uyifumene, ungaqhubeka nofakelo. Landela inkqubo kwaye emva kwamanyathelo ambalwa (ukhuphelo lucotha kakhulu: S), uya kuyivuselela iselfowuni yakho
Iingxaki endiye ndadibana nazo:
* Ukusilela ukufaka uhlaziyo: Kwenzeke kum okokuqala, kwaye indixelele ukuba izakusebenzisa ukubuyisela kwakhona kuba iselfowuni ibiya kuba iphosakele. Kwakungeyomfuneko, njengoko iselfowuni iqhubekile isebenza nohlobo lwangaphambili. Into endiyenzileyo yayikukusetha kwakhona okunzima (ukubuyisela umzi-mveliso) kwiselfowuni kunye nohlaziyo esele lusebenzile.
* Akukho nxibelelwano lwenethiwekhi kwi-NPS: Oku kubonakala kwiNew Studio Studio xa ujonge uhlaziyo lweselfowuni. Iphume kum izama amatyeli aliqela, okwesithathu.
* Ukuphazamiseka kweMainNPS xa uqala i-Studio entsha ye-PC: Ndibuyisele kwakhona, kwaye ndabona.
* Ayindazisi ukuba kukho uhlaziyo olutsha: Nangona umyalezo ungaveli, into ebalulekileyo kukuba ubonakala kwiwindows yohlaziyo.
Inguqulelo efakwe ngokwe "Malunga": Uhlaziyo 2.1 (Inguqulelo ephuculweyo okanye ekhethekileyo evela kwi-Samsung?)
* Ukonwabela kakhulu. Onjani umahluko ukusuka ku-1.5! 😉
Ukubulisa, kwaye ubone ukuba uyayifumana 🙂
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Uyihlaziya njani i-Samsung Galaxy Spica kwi-Android 2.1
Izimvo ezi-191, shiya ezakho
Ewe, kuya kuthi ukuba uhlaziyiwe ngenxa yokuthetha ngokungafihlisiyo, kuba kum, nge-yoigo spica yam, andifumani naluphi na uhlaziyo. "Iselfowuni yakho ihlaziyiwe", ine-1.5.
Ndifuna ngokwenene ukungcamla i-2.1, ndicinga ukuba ndiza kuya kwi-cyanogen, ndidiniwe kukulinda 😉
Ukugqwesa, ndiyifakile kwi-HTC Diamond kwaye isebenza ngokumangalisayo, kunjalo, kunye nokusikelwa umda, kodwa uyakubona ukubakho kwale software. Umbuzo ..? Ngenxa yokuba bengabonisi ukusebenza kweGPS, kungekudala ndiza kuyithenga kwaye akukho bhlog ndiyibona isebenza iGPS, kuphela kuYouTube kukho iividiyo ezi-2 kodwa ezingasekhoyo…. Ayibalulekanga okanye ndim kuphela, ndinomdla kuloo msebenzi ...?
Apha eSpain ayikaphumi, kungenxa yokuba yayineselfowuni, ukuba kukho uhlaziyo oluyi-2.1. Apha siqhubeka silinde uMeyi ukubona ukuba iyaphuma na, kwaye ezo zeOrange azinangxaki zokuhlaziya eyenye ingoma.
Kwaye bahlaziya i-Galaxy Spica ikwabandakanya iiterminal zeGalaxy? Okanye ngaba sishiyeke sishukuma njengesiqhelo? Kungenxa yokuba umntu ... yintoni ilaphu abalenzayo kuthi abasebenzisi beGalaxy i7500 ...
Isoftware yePC ayiyiboni nokuyazi ifowuni yam ... Indixelela ukuba isixhobo asinakuchongwa ngokuchanekileyo. Ndineziqhubi ezifakwe yi-Studio Studio efanayo kwiwebhusayithi ye-Samsung. Ndinokubona. Ayifundanga nememori khadi yam. Naliphi na icebiso?
Kulungile kum indixelela impazamo yoqhagamshelo kwaye ukuba akukho mzekelo wokuwuhlaziya ekugqibeleni siya kuqhubeka silindile kwaye kuye kwafuneka ukuba umhla wokuqala kaMeyi ungabi
Sazise xa kunokwenzeka nceda!
Kum iyindlela yokuhamba eshukumayo ... bendinayo ixesha elingaphantsi kweveki enye kwaye indenza ndifune ukuyibuyisela kwiorenji ... Ndifumana ukusilela kwebluetooh esele ndiyifundile kwezinye iisayithi ukuba iyi-android ingxaki, andinakho ukhetho lokuba ndikwazi ukuthumela iifayile kwi-bluetohh ... andifumani ukuba imiyalezo ifika nini kuba ayindivumeli ukuba nditshintshe umculo kuphela ozayo ngokungagqibekanga kwisiphelo, ibhetri ihlala Usuku lwe-1 kwaye ndinazo izinto ezininzi ezingasebenziyo ke andizisebenzisi kangako ... kunjalo ... umyeni wam unejeti kwaye unemisebenzi emininzi kwaye ayimnikanga ngxaki inye ... nditsho nebhetri Ihlala ixesha elide ndilinde uhlaziyo ngo-samsung ukuya ku-android 1 ... Ndiyathemba ukuba ihamba kakuhle ukuba akunjalo Sisiphelo esinjani esenziwa ngu-samsung.
Ndikwanaso nesiphelo sendlela esivela eFrance kwaye uhlaziyo luyavela, kodwa andikwazi kuhlaziya kuba kwinyathelo lokukhuphela livela lonke ixesha: «Impazamo kunxibelelwano neseva. Ukukhuphela kumisiwe. " kwaye nokuba ndiyinika kangakanani ukuzama kwakhona, ayinakunxibelelana (bendivavanya yonke imizuzu emi-3 okanye ngaphezulu kweeyure ezi-5 kwaye akukho ndlela ndinokuyikhuphela).
Ndiza kukuxelela ukuba ndingayihlaziya. Ukubulisa.
sele ndiyifakile i-pc studio. 1.3 kodwa andithathi iselfowuni kwaye ndizama ngokunyanisekileyo ngeendlela eziliwaka kwaye andazi ukuba ndingayenza njani ... ndinayo kwakhona, ndiyithengile ingaphantsi kwenyanga ephelileyo kwaye ndinomdla kakhulu .. bekungakuhle ukuba unokunxibelelana nam ... enkosi kakhulu
idatha yeedatha sitsho
nantsi inkcazo elungileyo
Ekugqibeleni ndiyifumene, ndakhangela kwiphepha leSamsung eFrance kwaye ndabona inguqulelo ye-PCStudio eyayingu-1.4 endaweni ye-1.3 ekhoyo kwi-Spanish (Isiphelo sam asisimahla sivela eFrance, ngeSpanish ndiyacinga. ayizukusebenza).
Uhlaziyo ngePCStudio 1.4 lwenziwe okokuqala kwaye ngaphandle kwengxaki yoqhagamshelo okanye ukusilela.
Njengoko ifowuni itshintsha ngohlobo lwe-2,1, ndiyayithanda ingxelo entsha nangona kusenokuninzi endinokukufumanisa.
Ngohlobo 2.4 ibluetooh sele ikusebenzela ??? kuba ilungile ngohlobo 1.5 Ngaba ukhona umntu owaziyo ukufaka irediyo okanye kwinguqulelo entsha ezayo?
ujinga paba xD
Ndine mobile ka Yoigo kwaye ndizamile yonke into, ndikhuphele i-PC entsha yeStudios French version, eyi-1.5. Nangona kunjalo, akukho ndlela ... kungenxa yokuba ifowuni yam yiSpanish? Naziphi na izimvo? Indixelela ukuba akukho hlaziyo lufumanekayo kwisiphelo sam ... kodwa iyandifumana kwaye yonke into ilungile!
Yintoni ejingayo ngu x mna ??? xk ukuba kunjalo, yeyiphi indlela yokungahloniphi abantu… hayi ???
Ndinayo le mobile ngeYoigo malunga neeveki ezi-2 okanye ezi-3, ndizama ukuyivuselela yonke imihla ngendlela eqhelekileyo, kwaye akukho ndlela. Ndisebenzisa iPcStudio 1.3, kwaye iselfowuni iyayiqonda kodwa ayifumani hlaziyo.
Ekugqibeleni ndafaka i-Android 2.1 ndisebenzisa i-Odin (kukho iitutorials ezininzi kwi-intanethi) kwaye nangona ekuqaleni ndingakhange ndibenesibindi sokufuna ukulinda, ndonwabile ukuba ndenzile. Iselfowuni ingcono kakhulu kuzo zonke iinkalo, iyamangalisa.
Inqaku: ukufaka nje i-2.1 kundinike umbono wokuba ukuskrola kwiidesika kunokulibaziseka okuncinci, okungakhange kwenzeke kum nge-1.5, mandundu ukufaka iLauncher Pro Beta, evela kwintengiso, kuya kuhamba ngcono kakhulu, cebisa i-100%.
Ngokubhekisele kwiBluetooth, bendinengxaki yokwabelana ngeefayile nezinye izixhobo, emva kokwenza uphando ngalo mbandela, ndiye ndafumanisa ukuba yenziwe ngolu hlobo, ayisiyompazamo, unokusebenzisa ibluetooth kuphela kwisandi (umzekelo: izandla zemoto simahla ). Nangona kunjalo, kwaye apha kuza into enomdla, kukho iinkqubo kwiNtengiso, ezenza ukuba ukusebenza kweBlueTooth kugqithiselwe iifayile, ewe, kuya kufuneka une-Android 2.0 okanye i-2.1 ubuncinci.
Imibuliso kubo bonke 🙂
Phendula yo higuero
Le yile imeyile ndiyifumene ivela kwi-Samsung xa ndibuza malunga nohlaziyo lwe-Android 2.1:
Sikwazisa ukuba eSpain, akukho luhlaziyo lwaseburhulumenteni lususela kwi-1.5 ukuya kwi-2.1 yesi siginali.
Okwangoku akukho lwazi, malunga nekota, ukuze ndikwazi ukukunika.
Ufumana umbuliso ofudumeleyo
Iqela leSamsung leSamsung
Ukuba bendisazi, ngendingazange ndiyithenge ifowuni!
EColombia inkampani encinci inike «Ukukhuthaza» iSamsun Galaxy Spica enenguqulo 1.5 kwaye kwakungekho ndlela yakufaka ingxelo entsha. Ndifumene le tutorial kunye ne-voila, ihlaziyiwe ngaphandle kwengxaki. Yenza nje uhlaziyo, sukusebenzisa lonke uqeqesho. Umbhali wesifundo ucacisa ukuba yeyakwa-Samsung ene-firmware i5700L okanye i-GL-i5700L. Ngaphambi kokuhlaziya, licebo elilungileyo ukubhala yonke idatha ye-APN.
Eli phepha liyi:
Ngethamsanqa kwaye siza kulinda i-2.2
Ndidinga ukuba undithumelele i-pc studio 1.3 okanye i-1.4 kwi-imeyile yam nceda, kukuba apha eArgentina yindawo efanelekileyo yolu hlobo lobuqhetseba, ke ndiyakrokrela kuba ayisiyiyo iselfowni kwangaphambili, ayisiyiyo ifanelekile kwezi garcas ukutyala imali kuhlaziyo lwabasebenzisi be-spica, imeyile yam yile jdhdanes@gmail.com, kwi-hotmail ikwangumsebenzisi we-id jdhdanes, kwaye yahoo ngu punkrock970@yahoo.com.ar Enkosi kuni nonke, manene, bantu basebenzisa le foram.
uhlaziyo kunye no-Odin, kuphela kwendlela okwangoku. Kwakhona, kufanelekile ukuhlaziywa kwaye, njengoko umkhiwane utsho, faka isiqalisi !!
Ndiyithandile le ntetho, ngakumbi ukuba yinkcazo ye-android enefowuni yewindows ngasemva .. hehehe
Molo, ngaba umntu unokundixelela ukuba ungayilungisa njani ifowuni ukuze usetyenziso lugcinwe ngqo kwi-sd xa ukhuphela kwintengiso kwaye uzifaka?
Kubonakala ngathi kungekudala bazakuvumela uhlaziyo lube yi-2.1 eSpain. Ndabhalela kubo ndinomdla kuhlaziyo lweSpica 2.1 kwaye le yayiyimpendulo yabo:
Mva kwemini XXX:
Ungajonga kwiintsuku ezimbalwa ukuze uyihlaziye, kuya kufuneka ungene http://www.samsungmobile.es Kwicandelo lenkxaso> uhlaziyo lwe-firmware> landela amanyathelo okuyihlaziya.
Imibuliso kubo bonke (ndingumsebenzisi we-Android kangangeentsuku ezilishumi elinesihlanu kwaye ke ndimtsha kule bhlog)
Ndibhalele uSamgung kwaye bayangqina ukuba sele benalo uhlaziyo olukhoyo:
Ndiyakwazisa ukuba uhlaziyo kwiwebhu sele lukhona.
unayo isipika? Ngaba ukhuphele uhlaziyo kwiphepha laseSpain?
Omnye asiqinisekise nceda !!!!
Kum kwi-NPS, ine-1.5, indixelela ukuba akukho nguqulelo iphezulu. Sisalindile, akukho nto ivela ku-2.1 okwangoku
Kuyabonakala ukuba kule nto ndiyibonayo itsala ugoogle, babeke uhlaziyo kwaye lusebenza kuphela kwiifowuni zasimahla. Abo bethu banefowuni kunye neYoigo, iOrange ... akukho nto kwaphela. Kwaye ukusuka kwi-Samsung, banika ixesha elide besithi kukho izehlo ezinjengeetheminali ezithile. Ukusuka kuYoigo bathi abazifumani izandla zabo kwisoftware ... kodwa kuyabonakala ukuba, ukuba unesiphelo esibonelelwa ngoncedo, ubuncinci okwangoku akukho hlaziyo ku-2.1
Kuya kuba lihlazo ukuba basishiye sishiyiwe sine-1.5, ewe.
Ndinayo ifowuni efakwe kuYoigo, jonga ukuba sibeka uxinzelelo okanye enye into ...
Ngaba ukhe wazama ukuphinda usete ifowuni? Ukuze ibuyele kuseto lwefektri hayi iOrange / Yoigo / njl?
Andizukuzama ukuseta kwakhona kwaye ndiyivuselele, kuba ngaloo nto ndiphulukana newaranti ... kwaye ngenxa yoko, ndibeka emngciphekweni wokuyibhengeza. Ndifuna i-2.1 kwaye ngaphandle kokuphulukana newaranti ... kwaye i-Samsung kufuneka ibonelele kwaye ingalahli iibhola ngaphandle.
Inyani yile yokuba ndibhale ngaphandle kokuyivavanya. Ndikholwe nje ngohlobo lweSamsung kwaye ndiyifumene inika umdla wokuphawula ngayo.
Ewe kunjalo, ukuba uthi ayisebenzi ngeenkxaso-mali ezixhaswayo zikaYoigo, andizukuzama, ubuncinci ndide ndiyazi ngcono i-Android OS.
Kuthatha ixesha elingakanani ukuba i-samsungs iphendule iphepha lemibuzo lemibuzo ngenkxaso yobuchwephesha?
Qhagamshela ii-Spicas zakho kwi-PC ukuba uhlaziyo olusemthethweni sele lufikile, ubuncinci kuYoigo. ^ _ ^
Kulungile, paqkr !!!!
2.1 kwiSpica yam noJoigo, ndiyasebenza 🙂
Ndibanjiwe kwinyathelo 3 lohlaziyo, ngaba likuthathe ixesha elide?
Ndicinga ukuba ndiza kuyizama kwi-xp kuba ndibanjiwe
Ewe ekugqibeleni sele ndinenguqulo 2.1 Ndicebisa ukuba wenze uhlaziyo kwi-win xp kuba emehlweni am indinike iingxaki, yiza, ayisiyi-xp nangona kunjalo khange ndibenangxaki, ke ndiyakukhuthaza ukuba uyenze , kuyinyani ukuba buhlungu
Imibuliso kubo bonke abanespica kunye nakubo bonke i-androidsis
Isebenza njani kuwe? Sele ndinamajinga aliqela, kodwa ukususa ibhetri. Ngo-1.5 khange yenzeke kum. Ewe kunjalo, iphucule kakhulu
paqkr: Isebenza ngokugqibeleleyo kum, ngaphandle kwengozi. Ihamba kakhulu, ngokukhawuleza okukhulu, ijongeka ngathi yenye iselfowuni.
Ewe, ukuba namhlanje ndichithe yonke imva kwemini ndinika induku kwaye akukho nto okanye ukusilela okuncinci kum njengoko uJ esitsho, kubonakala ngathi enye into ehamba nayo iyahamba kakhulu ke ngoku ndiyayincoma kuye wonke umntu kuba iselfowuni efikelelekayo kakhulu kwaye Iiposibilade ezinkulu kakhulu kwaye i-yoigo inexabiso eliphantsi ngokwenene
Hayi kwakhona sitsho
Ixesha lokuqala undinike impazamo xa uhlaziya kwaye sele ihlaziyiwe kakuhle. Kodwa ngamanye amaxesha into ecothayo ijinga kum. Umzekelo, umsebenzi obulala ngamanye amaxesha uxhoma ifowuni yam kwaye i-1.5 yayindifanele. Kwelinye icala, ikhibhodi kwi-2.1 ingcono
Ngaphandle kokuncipha okuthile kwiLauncherPro kungcono kunangaphambili kwaye ikhibhodi sisikhalazo.
Kungenxa yokuba kukho abanye ababulali bomsebenzi abavala inkqubo ye-phantom (imenyu yesamsung yesiko) ke oko kufana nokuvala umphicothi kwiifestile kwaye ifowuni kufuneka uyiqale kwakhona ukuze kubonakale ngathi ixhonyiwe
Ewe Ewe. Sele ndiyisombulule ngokufaka uluhlu lwemisebenzi yokungahoyi iphantom leyo.
Ngapha koko, enkosi ngempendulo yakho.
Nge-spica entsha akunakwenzeka ukuba ndihlaziye. Kwi-W7, esi sixhobo asindamkeli, kwaye kwi-XP i-NPS 1.3 kunye ne-1.4 ikhutshelwe bobabini kwiwebhu bayayiqonda kodwa bandixelela ukuba ayihambelani nenkqubo. Naziphi na izimvo?
Kubonakala ngathi ndishiywe ndixhonywe kwinqanaba lesithathu, uhlaziyo luza kukuthatha ixesha elingakanani? Enkosi
Molo, kwenzeke into efanayo kum, iintsuku ezintathu ndicinga ngayo, kwaye ekugqibeleni ngethuba ...
Ewe, ndiyenzile kwifowuni ekhutshwe kwiorenji, kunye neewindows media player enesp3.
Ngoku kuza i-pijada: ungalibali ukudibanisa i-USB
UKUSETYENZISWA KWE-SETTING-PHONE STATUS-ISETETINGS, KUNYE NOKUKHUBA UKUKHETHA UKUSEBENZISA I-USB KUPHELA NJENGOKUGCINWA KWE-MASS, ukusuka apho kwitrayi yokuqala.
Ngethamsanqa (nangona ndicinga ukuba awuzukuyidinga)
Ndiyathemba ukuba ndikuncedile kunye nabo bonke abenza into efanayo.
Uhlaziyo luthatha imizuzwana
Ngethuba nje uhlaziya kwi-xp, kungcono ukuba uyenze kwindawo ecocekileyo ngokufaka i-nps kunye nabaqhubi be-cd abakunika yona ngeselula, ungalibali ukubeka iselfowuni kwimowudi yokulungisa, kum kwi-W7 nakwi-W vista indinike ukusilela
Ngaba iSpica yethu iya kuze inyuselwe kwi-2.2?
Nawuphi na umbono onengxaki yokuhambelana ...? : S
Ukungangqinelani uthetha ukuba ayikuvumeli ukuba wenze izinto ezithile? okanye ayikuvumeli ukuba wenze nantoni na kuba kuyinyani ukuba eminye imisebenzi iyahambelana kuphela neetheminali ezithile kuba le nkqubo yeyazo zonke iiSamsung, ke ndicebisa ukuba wenze le nto ndibeka yona ngaphambili
Ndinayo iveki yokugqibela ye-yoigo kwaye sele indixelela ukuba ingxelo ngu-2.1-uhlaziyo1 oko kuthetha ukuba sele ndiyifakile ????? !!
Kwi-XP (NPS 1.3) indixelela ukuba ayihambelani, ayindivumeli nokuba ndihlaziye. Ndiyazi ukuba le mobile ayisebenzi kunye nezinye iindlela, kodwa ayisiyiyo loo nto. Kwi-W7 (NPS 1.5) iyandibona kodwa ayisifumani isenzo. Andazi ukuba ndi-orenji na ... ukuba iorenji ethile ikwazile ukuhlaziya okanye inengxaki efanayo, nceda undazise
Le putxi, sele ihlaziywa updated
Enye eneOrange Galaxy, kwaye ngaphandle kokukwazi ukuyivuselela ...
Masibone ukuba baya kusebenza na kwaye bayayikhupha.
Okanye ukuba umntu unesifundo sokwenza iOrange ukuba atsho njalo
Ndinayo iOrange kwaye indixelela ukuba ayihambelani, kwaye nesaziso sokuhlaziya asiveli, ndicinga ukuba kuya kufuneka silinde. Kwezinye iiforamu ndizifundile ukuba kude kube nguSeptemba akukho nto, ndiyathemba ukuba ayifani kwaye siza kuba nayo ehlotyeni!
Nceda uqinisekise ukuba abantu be-yoigo ukuba ungayihlaziya ifowuni kuba ndivela kwi-xp:
+ i-nps 1.3 1.4 iyaluqonda uhlaziyo kodwa luyayeka kwaye kufuneka ususe ibhetri ukuze uyifumane kwaye emva kokuyiphindaphinda amatyeli aliqela.
+ ikie ayiyazi ifowuni yam.
Ndibhabha nge-yoigo kunye ne-samsung naluphi na uluvo (andifuni ukuba ndisincothule okwangoku)
Phendula umntu omdala
oldlastman ndivela kwi-yoigo kwaye ndiyakuqinisekisa ukuba xa inokuhlaziywa, ngokucacileyo isiphoso asizukuvela kwi-yoigo nakweyiphi na imeko ukusuka kwisamsung kum kwenzeka into efanayo kuwe (ngokufanayo ngaphandle kokuba ibibonwe)
Ukuba ndikhumbula ngokuchanekileyo kwelinye lamalinge, i-NPS indixelele ukuba kufuneka ndiyifumane kwaye ndothuka kanjani ngequbuliso sele ndinayo i-2.1
Ingcebiso yam kukuzama kwi-pc engenanto yakwenza nayo kwaye engazange ifakwe kwiplagi kwaye uyenze yonke ukusuka ekuqaleni nakwi-cd abakunike yona, okanye uzame kwikhompyuter apho sele ihlaziyiwe .
ngendlela endicebisa ngayo wonke umntu ukuba ufake isiqalisi se-beta, inyani ilunge ngakumbi kune-samsung phantom, bendimangalisiwe ngokwenene.
Molo ndifuna ukuvuselela i-Samsung Galaxy Spica kodwa uhlaziyo alukafiki eArgentina, bayazi ukuba ndingayihlaziya ngephepha le-Samsung Spain kwaye ndingayihlaziya njani, nceda, umntu onokuthi andincede ukusukela nge-Android 1.5 kubi, akuncedi nto, ndiyathemba ukuba iimpendulo zakho
Amava am: (Yoigger)
Emva kokuzama okuninzi kwaye ndingafumani nto, ndineempazamo kuwo onke amacandelo enkqubo, ndafaka inguqulelo engu-1.4 yePC Studio kwilaptop eneVista (kwi-W7 ayizukuyeka) kwaye kulapho indivumele ndihlaziye ixesha lokuqala.
Izinto ezininzi ekufuneka uzigcine engqondweni:
-Ibhetri kwi-100% okanye phantse.
-Inkqubo njengoko ifakwe ngokufanelekileyo nangokucocekileyo. Ukuba ubona ukuba inika ngengxowa, ukufaka kwakhona, ukunika igama kwakhona okanye ukucima phambi kwefowuni yeSamsung ye «Archivmos yenkqubo».
-Ifowuni ikwimo yokulungisa. Ewe, lo mhlohli sele eyitsho.
Ndisuka eArgentina kwaye ayizukundivumela ndiyihlaziye…. andazi ukuba unako apha? Enkosi. Ndinayo i-galaxy spica
Molweni bantu, ndinombuzo olandelayo, ndinayo i-Samsung Galaxy i7500, iyafana kakhulu ngobuhle, kodwa imodeli yahlukile kune-5700 .. umbuzo wam ngulo, ungayihlaziya ethambileyo iye ku-2.1 ngale khokelo? yua ukuba kuyo yonke indawo bathetha nge-5700 hayi imodeli endinayo, kulapho ndadibana khona nohlaziyo .. amanyathelo ayafana ??? Enye into, hlaziya i-firmware ibe yi-1.6, bendine-1.5, kwaye ngoku ndigcina yonke into ngesiNgesi, ndingatshintshela kwiSpanish? Ukuba ndiyayihlaziya, iya kwiSpanish ???
Molo ndine-samsung galaxi spica kwaye andifumani zinto zokwenza ukuba zilungele ukuba umntu unokundinceda nge-imeyile yam jpserpa@hotmail.com enkosi kakhulu corty
kapo undixelela ukuba isixhobo asihambelani esingaxhasi uhlaziyo lwesoftware !!!! Ngaba ungandiphendula ngokukhawuleza? Enkosi!!
Ndiyayidibanisa nayo yonke into kodwa ayindivumeli ukuba ndenze nantoni na kuba ithi iselfowuni ayindivumeli ukuba ndenze utshintsho kwaye ngenxa yezizathu ezifanayo ayindivumeli ukuba ndiyihlaziye, ndingavuya ngolwazi endivela eGuatemala
Molweni… ninjani !!! Ndiyanixelela ukuba ndingayihlaziya… kodwa kamsinya nje ndakuba ndigqibile ukuyikhuphela, ifowuni iphinde yaqala phantsi kwaye igama elithi samsung aliyeki ukudanyaza kwaye aliqali… .ndenza ntoni? ???? enkosi
Ewe, ndenza inkqubo yokuhlaziya iSamsun Galaxy Spica kwaye xa ikhuphela uhlaziyo ithi: INGXAKI UKUNXIBELELANA NENKONZO. UKUKHUPHISWA KUYEKILE
Molweni nonke!! Namhlanje ndifumene i-galaxy spica kwaye bendisoloko ndibona ezinye izimvo kwaye ndiyabona ukuba ezinye iinkampani ezingezizo iorenji sele zinayo, ndivela e-orenji kwaye ndingathanda ukubona ukuba umhla oza kuphuma uhlaziyo sele ukhona igcinwe, kuba Kuyinyani ukuba inguqulelo 2.1 kufanelekile. Enkosi!
UHubert Carrera sitsho
Ndiyenza yonke inkqubo, kodwa iyandixelela ukuba akukho hlaziyo kwifowuni yam… ndincede….
Phendula uHuberto Carrera
UHuberto akasayi kuba uvela e-Orenji kwaye uhlaziyo lwe-Orenji alufumaneki, kodwa ukuba i-NPS yakho ayikuxeleli ukuba kukho uhlaziyo lwefowuni yakho, andazi ukuba ungazikhangela njani kuba ndizitsiba ngokuzenzekelayo isaziso.
Ngendlela, kumyalezo ongaphambili endikubhalele wona, bendinengxaki yokufaka uhlaziyo kuba akukho nto izolileyo kuwo wonke umntu osele esonjululwe kwaye sele ihlaziyiwe i-Android yam ilungile kakhulu kodwa ke ndiyivuselele ikakhulu ngenxa yebluethoot eyayinayo yonke into igqunyiwe ngaphandle kwekhonkco kunye nesikhwenene semoto, khange indivumele ndifumane okanye ndithumele nantoni na kwezinye ii-mobiles okanye iikhompyuter kodwa sele isonjululwe.
Molo, ndivela e-Orenji kwaye ndazama iintsuku ezili-15 ezidlulileyo kwaye akukho nto, ngaba kukho umntu owaziyo okanye xa befumana uhlaziyo lweorenji?
Qaphela: nceda xa usenza uluvo, utsho ukuba uvela kweyiphi inkampani, okanye ukuba ukhululekile ukuze ungabhidanisi abantu. AKANAKUHLAZIYA NGOKUTSHA NGEXESHA ISAMSUNG SPAIN ITHETHA UKUBA NGOMZUZU KUPHELA AMAXESHA ASIMAHLA. Yiya TIMO.
I-Yoigger nayo kwaye isebenzisa inguqulelo 1.5 yesitudiyo se-pc esitsha kwi-W7 kunye ne-Samsung I5700
Kwenzeka ntoni kum kukuba inkqubo yohlaziyo isebenza ngokwesiqhelo ide ifike kwinqanaba lesi-3 (hlaziya) apho ifowuni ibuya khona, ishiya igama elingu-samsung kwiscreen ngokungapheliyo. Emva koko kufuneka ndisuse ibhetri ukuze iphinde isebenze
Nceda ubeke inkampani esebenzayo kwaye ukuba i-terminal yakho isimahla okanye ayikho.
isimahla, ithengwe nge-miami .... yi-samsung i-7500 .... kwaye ndiyisebenzisela ubuqu eArgentina .... ndiyayihlaziya kwi-1.6 yedonut kodwa ndingathanda ukubeka i-2.1 .. kuba lonke ixesha indiphosa ngeempazamo .... enkosi kwangaphambili
Molo, ndineSpica kunye neorenji ukusukela ngo-Epreli. SingoSeptemba 30 kwaye andazi kwanto ngohlaziyo olonwabileyo ukuya ku-2.1
Andikhathazeki nokuba ndibuze xa ephuma. Ndingathanda ukwazi ukuba kunokwenzeka na ukuba uyihlaziye le fowuni ngesandla (kunye no-Odin) nokuba ayikhululekile.
Ukuba nabani na uyazi nantoni na eyenye yeorenji nceda UNCEDE
U-Orenji uqinisekisile kule veki ngohlaziyo lweHero ukuya kwi-2.1, kwaye ngo-Agasti bathi bayasebenza kwi-Galaxy Spica (nge-twitter) kwaye izakubakhona kwakamsinya .. ke kufuneka silinde, ndiyathemba ukuba ayenzi njalo yiya ngaphaya kuka-Okthobha, ukuba sele benayo i-HTC kunye neBoston, kufuneka sithembele ukuba uGoogle uya kufikelela kwisivumelwano ne-Samsung .. kuya kufuneka sibeke uxinzelelo ngakumbi!
Ndiyathemba ukuba kunjalo, kwaye ngaphambi ko-Okthobha iorenji inokuhlaziywa kwespica
Ndiza kulinda ezinye iiveki ezimbalwa kuba ndinedatha emnxebeni. Andiziva ndifuna ukugcina okanye ukuphulukana nabo, kwaye kuba ayizi kum ngoku kwinyanga e-1. Ukuba awukho umhla omiselweyo ka-Novemba, mayisasazwe kwaye iphose ivumba.
Ewe kunjalo, okwangoku, xa kuphela isiphelo, sele ilungile inqaku leorenji.
Ndinomthala we-samsumg, sele ndiwuhlaziye kodwa ngoku ukuhamba kwe-3G akusebenzi kum, ndiyivula njani, nceda, umntu andixelele ukuba ndenze njani, undithumelele i-imeyile enempendulo, ndiza kukubulela
Ndihlaziye ukusuka e-odin kwaye akukho ngxaki, malunga ne-3G ndibize iorenji ukuba ayisebenzi kum kwaye bandicacisela indlela yokwenza ngesandla kwaye akukho ngxaki, isebenza ngokuchanekileyo kum, fowunela kwaye ikulungiselele, kwaye uzakundixelela!
«Ndihlaziye ukusuka kwi-odin kwaye akukho ngxaki»
Chaza ukuba zeziphi iimeko ozihlaziyileyo kunye no-Odin nceda. Ngaba iselfowuni simahla okanye akunjalo? Ukuba akunjalo, ngaba kunokwenzeka ukuba uyihlaziye ngaphandle kwenkampani (iorenji, iYoigo, iVodafone ...)?
Ewe kunokwenzeka ngokupheleleyo ngaphandle kwenkampani okanye ukuba isimahla.
Isizathu sokuba i-3G ingakusebenzelanga kungenxa yokuba kunye ne-Odin oyenzayo kukuseta kwakhona iselfowuni, kwaye ikwasusa ii-APN esele zisetiwe. Kuya kufuneka ufake ngesandla i-opharetha yakho (ngokuhamba kancinci uyakuyifumana) kwaye uya kubona ukuba yonke into itsala ngokugqibeleleyo.
Ndine spica e-orenji, nekhadi le-orenji alikho simahla kwaye i-3g yaphuma ndatsalela iorenji bandisombululela yona, kuthekani ukuba ndibone kwiiforamu ukuba ibibhetri eyi-100% xa usenza it odin .. Kodwa okwangoku akukho ngxaki !!
abantu abalungileyo. Ndine galaxi 1.5. Ngaba iyaziwa ngokuhlaziya i-2.0 okanye i-2.1 eArgentina?, Inkampani yaseMovistar. onolwazi, yabelana, kuba sele enkosi kakhulu. fupuat@hotmail.com efanayo kwi @ gmail
Ndiyathandabuza, ungandinika ikhonkco lokukhuphela ukuze ndihlaziye i-Samsung Galaxy yam kuba ndiphindaphinda inqaku lakho kodwa alibonakali, enkosi kwangaphambili, imibuliso
Ngaba .. sitsho
Ndiza kukunika isandla, kukho ikhonkco lokukhuphela istudiyo se-pc esitsha http://www.samsung.com/es/support/mobilesoftwaremanual/mobilesoftwaremanual.do?page=MOBILE.SOFTWARE.MANUAL
Phendula kwintando ..
Molo, bendisazi okwesi sithuba okwethutyana, ndivela eorenji kwaye ndinengxaki efanayo ekhankanywe apha ngasentla, abasavumeli ukuvuselelwa. Ngaba kukho umntu ofowunileyo okanye owaziyo umhla othile wokuba sihlaziye iselfowuni kwi-Android 2.1? Enkosi!!
Ndine spica 1.5, kwaye akukho ndlela, i-nps indixelela ukuba ayifuni kuhlaziywa: Ewe
Molo, ndinombuzo, leliphi inyathelo lokuqala ekufuneka ndililandele kwaye uthathe isigqibo sokuba uyephi?
Ndikucebisa ukuba uhambe ngeli phepha:
Apha uneenkqubo kunye nesifundo esincinci
Bakhubaze uhlaziyo kwiinyanga ezisi-8. I-Orenji isola i-Samsung kunye ne-vice versa.
Molo, nantsi into abandixelele yona kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ezivela kwiwebhusayithi yeSamsung:
Othandekayo D. Diego:
Siphendula umbuzo wakho owufumene kwiZiko leNkonzo yaBaxumi
Umthengi, ngokunxulumene nesiphelo sakhe SAMSUNG.
Ngokunokwenzeka uhlaziyo luya kusebenza kungekudala, khumbula ukuzama
hlaziya i-terminal kwinkqubo yokusebenza yeWindows XP kunye nokukhuphela
isicelo esivela kule khonkco:
Nangona kunjalo, ukuba unqwenela ukwenza nawuphi na umbuzo malunga noku, siyakumema
ukunxibelelana nomnxeba wethu 902 17 26 78, apho sinokubonelela khona
Siyayibulela intembeko yakho kuluphawu lwethu.
Ukuba uneminye imibuzo, siya kukuvuyela ukukunceda.
I-Samsung Electronics Iberia, eMzantsi Afrika
Inombolo: 902 17 26 78
Iphepha lewebhu: http://www.samsung.com
Baye bandixelela into enye ukuba bayikhuphile kule veki kodwa ukuba ayifumaneki…. akukho nto iphikisanayo? yeka iintloni ezo zeorenji
Inguqulelo 1.3 ayiqapheli iselfowuni yam
Ngaba ikhona into eyaziwayo malunga nokuphuculwa kwe-2.1 kwi-Orange spica? Ngaba sele kunokwenzeka?
molo keria ukwazi ukuba ukhona umntu owaziyo apho ndingayihlaziya khona i-galaxy yam ibe yi-2.1 andiqondi ukuba kufuneka ndenze njani ukuba kukho umntu owaziyo ukuba ndiyakubulela x nceda ndenza impambano ngabantu
Molweni nonke, namhlanje 11 12 2010 Ndikwazile ukuvuselela i-galaxy spica ukusuka kwi-orenji ukuya ku-2.1 yokuhlaziya1 ngeNps kundithathe kancinci kuba kuye kwafuneka ndiyishiye njengefektri, kodwa yenze utshintsho olunomdla kakhulu, itshintshe imenyu , ikhamera (ngoku ineenketho ezininzi) kwaye isantya sesiphelo siphezulu.
Enye into kukuba isidlali somculo sinokulingana.
Ngapha koko, ndiyathemba ukuba la magqabantshintshi asebenza njengesilumkiso, ndilibale:
I-pc yam ineewindows 7 32 bits kwaye nje ukuba ukhuphele uhlaziyo iya kukuxelela ukuba i-nps ayisasebenzi kwaye kuya kufuneka ukhuphele ii-kies.
Kulungile, ndenze amanyathelo afanayo nawe kwiifestile ezisixhenxe kwaye indixelela ukuba akukho hlaziyo, kubalulekile ukuyenza kwi windows XP njengoko besitsho okanye hayi? Ndiyaphambana…
Molo mhlobo wam, ndingathanda ukwazi ukuba ungandinceda na. Ndithengele iSpica umfazi wam kwaye ndingathanda ukuyinika uhlaziyo lwe-2.1, ndivela eVenezuela, enkosi ngokuqwalaselwa
Ngelishwa umsebenzisi ongezantsi wenza le ngxelo:
Ndinespica esivela kwimovistar ePeru Samsung kwaye undithumelele umyalezo esithi uhlaziyo aluzukukhutshwa eLatin America kwesi sigxina.
Ndiyoyika ukuba kuyakufuneka wenze uhlaziyo kunye nenkqubo ye-Odin
Nali iphepha apho bakuchaza khona:
Khumbula ukuba yinkqubo ebuthathaka kwaye kufuneka ufunde kakuhle kakhulu into ekufuneka uyenzile ukuze ulunge.
Ndiyathemba ukuba iluncedo kwaye ndiziva ngathi kwilizwe lakho nakuyo yonke i-Latin America abanalo olo hlaziyo, kodwa ukuba yonke into ihamba kakuhle ungabeka iROM engcono kuyo kunale ndinayo.
ndiza .. sitsho
Ndivela eVenezuela, kukho ikhonkco lokukhuphela elifakiweyo kwaye lihlaziya yonke into.Ndivela eCaracas, eVenezuela. Nantoni na, buza i-imeyile yam. wilmer.galaviz159@gmail.com http://www.samsung.com/es/support/mobilesoftwaremanual/mobilesoftwaremanual.do?page=MOBILE.SOFTWARE.MANUAL
Molo liqabane! Sikufutshane, ndivela kwiitikiti. Ngaba ukwazile ukuvuselela i-samsung galaxy spica yakho kwi-Android 2.1? Ndilinde impendulo yakho; Kwaye ukuba uyenzile, izakuba kukuba ungandinceda kancinci, mzalwana, ndizakuphambana nefowuni yam ngo-1.5. Enkosi! Ndilindele impendulo yakho kungekudala.
Hayi kulula kakhulu nge-odin ... ekuphela kwento ekufuneka uyenzile kukufumana iphepha le-venezuela Android andinalo ikhonkco kodwa nge-google uyakufumana, kulungile yandikhonza kakhulu kwaye isifundo silula bendisoyika kodwa yonke into ihambe kakuhle !! amatyeli aliqela kodwa yayikukungayazi indlela yokulungisa ingxaki ... eyesihlanu yayiyeyomtsalane kwaye ndayihlaziya ibe yi-froyo 2.2 kodwa eyona ilungileyo kum yi-v2.1 kungcono ukuba uceba ukusebenzisa ifroyo ndincoma ukuba hlala unje ....
http://androidve.com/2011/06/rom-eclair-2-1-original-movistar/ Ayinamsebenzi into yokuba umqhubi yinto enye ukuba awuyiqondi le nto iza kukunceda:http://www.venezuelandroid.com.ve/2011/02/actualiza-tu-samsung-galaxy-spica-la.html... yenza lula ngokwakho, nosana luyenza ngaphandle koloyiko oluncinci ... ungachithi imali uzivumela ukhohliswe esitalatweni ...
Ndincede, ndincede, manyathelo mani ekufuneka elandelwe? Andikwazi ukuhlaziya kwaye sele ndiphambene
Molo, ndiseColombia, ndiyifakile iPC Studio ndaza ndadibanisa iSpica, kodwa xa ndiyivuselelayo indixelela ukuba sele inenguqulelo yamva nje, kodwa iyaxoka kuba kwi-firmware info iyaqhubeka isithi 1.5, ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba inokuba yintoni?
Ndiyabulela kakhulu !
Abaqhubi abayihlaziyi imixholo yale mobile kwaye yiyo loo nto ihlaziywa kwezinye iindawo ukuba kwaye kwezinye akunjalo, yiba nomonde ukuba izakufika
Molo, ndizama njani ukuvuselela i-Samsung yam? Ingxaki kukuba uhlaziyo luqale ngaphezulu kweyure edlulileyo kwaye kwenzeka ntoni kwiscreen ukufaka uhlaziyo kwikhompyuter nakwiselfowuni enophawu lweSamsung kwiscreen . Ndicinga ukuba akhonto ayenzayo kodwa ndiyoyika ukumchukumisa, ukuba kukho umntu ambonayo andixelele into. Enkosi
Ezinye iinkampani zeefowuni kufuneka zilungelelanise iziqulatho zazo kwiinguqulelo ezintsha, ukuze ezinye iifowuni zihlaziywe ngamaxesha ahlukeneyo
Uxolo, impendulo ibiyileya yangaphambili, kuba nguwe, le nto inye yenzekile kum, kuya kufuneka uyibuyisele kwimeko engxamisekileyo (cofa iqhosha levolumu phantsi + kwekhamera + kunye neqhosha elicimileyo) kwaye uzame kwakhona, ukuba akukwenzi nto (yenzekile kum) khupha ibhetri kwaye uyilayite kwakhona kwimowudi yokubuyisela, inkqubo iphinde iyilayite kwakhona kwaye uzame kwakhona, ibichukumisa isimilo sam seeyure ezimbalwa kodwa ekugqibeleni Ndiyibeka emsebenzini, ndizolile, akukho nto yaphuka
Uncedo olugqwesileyo uJoseph, ixesha le-1 andikwazi ukuyifaka kwimowudi engxamisekileyo, bendibetha, kodwa ndiqwalasele ndakhupha ibhetri ndayilayita kwimo yongxamiseko yiyo lonto
Phendula ku luismen
UJosé. Ekupheleni kwenkqubo ndikwazile ukuyibeka kwimowudi engxamisekileyo kodwa ndothuswa kukuba ekugqibeleni indixelele ukuba ayinakuhlaziywa. Ndiyenzile le nkqubo amaxesha ama-3 ngemowudi engxamisekileyo kwaye akukho nto ndiya kuyenza?
Enkosi kakhulu, nangona bendilibele kancinci kwaye ndingakhange ndigcine datha (xD) uhlaziyo endiye ndakwazi ukulufaka ngendlela etshisayo, kwaye yonke into ilungile.
Ndingayichaza inkcazo yakho ngentetho elungileyo ... Ukuqonda okuhle, amagama ambalwa anele.
xD_ David sitsho
Iselfowuni yam siyayikhuphela ... phantse iyure kwaye ayenzi nto, ndingenza ntoni? (Ndiyazi ukuba le nto sele ivakalisiwe, kodwa andiyiboni imiyalezo edlulileyo ...)
Kuya kufuneka uyikhuphe kwaye uyiqale kwakhona kwimowudi engxamisekileyo: iqhosha levolumu phantsi + iqhosha lekhamera + iqhosha lokucima) kwaye uzame kwakhona, ukuba ayenzi kwanto, yenza umsebenzi ofanayo kwakhona kodwa uphinde uqalise ipc kunye nenkqubo, Ndiyathanda oku iiyure ezimbalwa ndide ndiyenze le nto kwaye iyandisebenzela, ndiyathemba ukuba iyanceda
Kwi-Odin andiboni nto malunga ne-com port mappig, kufuneka ndenze ntoni?!?!
Molweni, xa ndiqhagamshela ifowuni kwikhompyuter, ii-kies aziyiboni, enyanisweni indinika umyalezo othi "I-Kies ayixhasi isixhobo" Ndingenza ntoni ngayo?
Ihlaziyiwe? I-Kies yamkela kuphela i-spica ukuba yinguqulelo 2.1
Ndiyilandele le khokelo, kodwa ukunyaniseka andazi ukuba yeyiphi na i-android eyi….
Ninjani nonke ndinayo i-spica ye-movistar venezuela kwaye ndingathanda ukwazi ukuba uhlaziyo lwe-2.1 sele lukhona enkosi
Phendula u jean
Ndinespica esivela kumvusi wasePeru uSamsung wandithumela umyalezo esithi uhlaziyo aluzukukhutshwa eLatin America kwesi sigxina
Molo, ndine-Samsung gt-i5700 evela kwi-Digitel GSM Venezuela kwaye ndingathanda ukuhlaziya le nkqubo… Nceda undixelele ukuba uhlaziyo lufikile kwaye ndingaluhlaziya njani?
Ewe :) sitsho
msn yam yiyo maty_mellib@hotmail.com . Ndingathanda ukubona ukuba ngaba umntu othile anganxibelelana nam na kuba ndathenga i-samsung i7500 kwaye ndingathanda ukuyivuselela (ine-1.5), ndingathanda ukuba ne-msn yomntu owaziyo ukuba akwazi ukunxibelelana nam njengoko ndilandela amanyathelo xa usenza uhlaziyo. Ndiyabulela kakhulu !
Phendula ewe ewe
Molo bahlobo, ndivela eVenezuela kwaye iSamsung yam yeyakwaMovistar, ndifuna ukuyisa kuguqulelo 2.1 kodwa iarhente indixelele ukuba umenzi akayikhuphelanga loo nguqulo, ndingayenza le nto uyibhalileyo ngaphandle kwengxaki ? Enkosi, ndijonge phambili kuncedo lwakho ...
Molo Oscar, ukuba ungayenza ngaphandle kwengxaki, sele ndiyenzile ngezixhobo ezininzi .. umbuzo unesiqinisekiso sesixhobo sokuba ukuba akunjalo okanye uphethe isofa yoqobo ayisebenzi, ndiyitsho kuba Ndisebenza noMovistar kwaye ndiyenza phantsi kwaloo meko inguqulelo entsha yesof kunye neziqalisi ezahlukeneyo okanye imixholo yazo kwaye isebenza kakuhle kakhulu
Hayi, yoyika kakhulu, kuba kanye xa kugqityiweyo ukuhlaziywa, undithumelele umyalezo wemposiso ongenakuchazwa kwaye wandibuza ngefestile ukuba ndenze uhlaziyo kwimowudi engxamisekileyo okanye ndiye kwiarhente egunyazisiweyo yeSamsung, Oko kukuthi, ifowuni yayingenanto, ndaya kwimowudi engxamisekileyo, ekufuneka uyikhuphile kwifowuni kwizibuko le-usb kwaye ucinezele: ivolumu (-) + iqhosha lekhamera + iqhosha lamandla, umyalezo uvela ngasemva emnyama kwifowuni , emva koko ndaphinda ndayiqhagamshela kwizibuko le-usb kwaye apho ndinokuthi ndenze uhlaziyo, loyiko olukhulu olundithatha !!!! enkosi uthixo ngako konke ukulunga 🙂
nceda ndifuna ukuvuselela i-samsung i5700 kwi-android 2.1 enkosi kakhulu.
Ndine-gt 5700L kwaye ndafaka i-pc studio entsha, yonke into ilungile, iyasazi isixhobo, kodwa ayibonisi uhlaziyo
Ndiyathemba uncedo olukhawulezileyo
Uvelaphi? Ndibuza oku kuba ngelishwa abo bahlala eLatin America abayi kufumana uhlaziyo ngokusesikweni, ndiyoyika kakhulu ukuba ungowalapha kuya kufuneka ulwe nenkqubo ebizwa ngokuba yi-Odin kunye ne-samdroid roms (umzekelo kwaye kulungile) Ungakhangela yonke into ngegoogle apho ungafumana khona iinkqubo eziyimfuneko kwaye ucaciswe kakuhle.
ngokuhlwa okuhle, zihlobo, ndinithengele i-samsung spica GT-5700 nge-DIGITEL.
Khuphela le nkqubo bathi, ndidibanisa iselfowuni kodwa xa ndiyinika ukuba ihlaziye ithi akukho zihlaziyo zikhoyo.
Kukho enye indlela yokuyihlaziya okanye inkqubo yokuzikhethela.
Ndiyaluxabisa uncedo loku: carlos2003_85@hotmail.com
Ngelishwa eLatin America akuyi kubakho hlaziyo ... kodwa ungandwendwela eli phepha apho unazo zonke iinkqubo kunye nesifundo sokuhlaziya
molo ndinayo i-samsung spica i-samsung PC studio ndiyayiqonda kodwa ndithe akukho zibuyekezo Ndiyihlaziya njani i-2.1 ?????
Jonga kumagqabantshintshi, apho kuyaphendulwa.
Abahlobo ndiya kukuxelela, ndihlaziya i-spica yam ngendlela ye-odin, kulula kakhulu kwaye ndiyayicebisa kuGoogle kancinci kwaye uyakuyifumana ukuba andikushiyi imeyile yam: avefenix_55@hotmail.com
Bahlobo abalungileyo, ndiyathemba ukuba ninokundinceda ... sele ndihlaziye izixhobo ezininzi kubandakanya eyam kodwa kunye neyokugqibela bacele ubabalo, i-pc yaqala kwakhona phakathi kokulayisha iifayile nge-odin kwaye ngoku ifowuni ayenzi qala kuphela isikrini q Samsung ithi om uphuma enye qm dic ekufuneka ndiyidibanise nefowuni kunye ne-pc endiyenzayo ndiyibeke kwimowudi yokulayisha yeapps okanye isoftware ukuze odin yenze umsebenzi wayo kodwa akukho nto yenzekayo andazi wenzeni okanye uyibuyisele njani ukuze ibuyele kuhlobo lwayo ngokungagqibekanga okanye ukuqala kwakhona uhlaziyo kwakhona .. Ndiyathemba ukuba iimpendulo nceda enkosi ngentsebenziswano yakho ...
Bahlobo abalungileyo, ndenze amanyathelo andixelela apha ngasentla, ndafumana uhlaziyo kwinyathelo lesi-3, ndihlaziya kwifestile yangaphambili, indixelela ukuba iselfowuni ifuna ukubuyiselwa, ndenza ntoni kule meko, ukuba ungandinceda, Ndiyayixabisa ingxamisekile
Molo, ndivela eVenezuela kwaye ndine-galaxi spica. Ndingathanda ukwazi ukuba uhlaziyo lweSoftware ku-Android 2.1 luyafumaneka. Ndiyabulela kwangoko!!!
molo ndenze onke la manyathelo angentla kwaye ndifumana ukuba i-gt-i5700 l ixhasa kuphela ezi zinto zilandelayo: isixhobo sokuhlaziya !! Ndizamile amatyeli amaninzi ukufomatha iseli kodwa andikwazi, ungandinika isandla ngale nto yenzekayo kum !! Enkosi!
yiya kwiphepha le-samsung lelizwe lakho kukho eli nyathelo ngohlaziyo lwenyani lilula ndiyenzile kwiphepha le-venezuela okoko ndikhona le ikhonkco http://www.samsung.com/ve/ Landela la manyathelo ikunika wona kunye ne-voila. nantoni na andixelela yona kwaye ndiyamnceda
Molo, ndivela eVenezuela, ndiyaphambana ndizama ukuhlaziya i-android iye kwi-2.1, kodwa akukho ndlela yakwenza, ndingene kwikhonkco kwaye andiqondi ukuba ngawaphi amanyathelo endiza kuwalandela. Nceda undikhokele.
Molo !! Ndizama ukuhlaziya i-GT-I5700 yam, ndiyifakile iNewPcStudo, indixelele ukuba uhlaziyo luyafumaneka, ndiyinike ukuvuselela i-firmware, ikhutshiwe, yonke into ilungile kodwa xa bendifaka uhlaziyo indixelela ukuba impazamo yenzekile, ndiyinika indlela yokubuyisela kwimeko engxamisekileyo ngezitshixo zeVolumeLow, Ikhamera kunye naMandla kwaye ndifumana imvelaphi emnyama enomfanekiso wememori khadi okanye chip kunye nomyalezo oluhlaza okwesibhakabhaka othi ungayicimi ifowuni ngesiNgesi, Ndiyenzile amawaka aliwaka kwaye akukho nto kwaye ngoku iselfowuni yam ayifuni ukuqala, ukuba ndiyayikhupha kwaye ndiyivule, ndihlala ndifumana umfanekiso weselfowuni, inqaku lesikhuzo (!) Kunye nekhompyuter.! Andazi ndithini! Andazi nokuba yonakele na! Nceda uphendule ngokukhawuleza !!!
Molo, ndinombuzo, andazi ukuba ndingazigcina njani izicelo zam endizikhupheleyo, ukuba zikwimemori yangaphakathi okanye akunjalo, ndenza njani i-backup? kuba xa ndihlaziya i-android yam ukuze ndibenazo izicelo endizikhupheleyo kwakhona?
Umbuzo wam yile ilandelayo… ngaba kunokwenzeka ukufaka i-WhatsApp kwi-Samsung Galaxy Spica, ngaba ifuna uhlaziyo okanye ingxelo entsha yento? kuba ndizamile amatyeli aliqela kwiindawo ezahlukeneyo kwaye andikakwazi ukuyenza
Kwenzeka into efanayo nakum. Kubonakala ngathi kufuneka uyihlaziye ifowuni kwi-Android 2.1. Ngoku ndikhuphela iiKies ukuzama ukuhlaziya i-firmware. Ukuba ndifumana oko kuthatha, ndiza kukwazisa.
UKarina Casas sitsho
Ndingavuya kakhulu ... bendisele ndicinge malunga nokuhlaziywa kodwa ndizamile ukuyenza njengoko kuchaziwe apha ngasentla kwaye ndifumana impazamo njengoko kuchaziwe nguMariangela kumagqabantshintshi ama-2 angentla .. kwaye andazi ukuba ndingenza njani enye into. !!
Phendula uKarina Casas
Ndingawafaka njani amanani endinxibelelana nawo kubungakanani obukhulu, mancinci kakhulu, unokundicebisa, enkosi
Ndinengxaki kwi-cel ndikhuphele istudiyo se-pc sohlaziyo lwe-samsung spica galaxy yonke into yayihamba kakuhle ndade ndafika kwinqanaba lesithathu lohlaziyo lwalusele luxhonywe kwi-chip eluhlaza okwesibhakabhaka ilungele ukugqiba apho impazamo yaphuma khona bendifuna ukugcina uhlaziyo ngonqamko olukhawulezayo ukunqamla umnxeba ndiqala kwakhona inyathelo lesibini kodwa ngoku alishiyi apho kwaye okona kubalulekileyo kukuba ifowuni yam ngoku ayifuni kungena okanye ukubhala kushiyeke negama elithi samsung. Umbuzo wam ngowokuba ndenze ntoni !!!!!! kuya kuba buhlungu oko
ubomi be-venezuela abukrakra, yenze ngephepha le-samsung.com.ve
Apho uhlaziyo luyaphuma, into embi ethatha ixesha elide ukuyivuselela kwaye ixhomekeke kwisantya se-intanethi abanaso. Ndinethamsanqa ndayibona, kwaye ndifumana ukuba le nguqulo 2.1 ... imenyu ye-hahah ibhetele kakhulu ukuba iguqula yonke into ye-bein XD musa ukukhohliswa apho kwaye bahlawulisa njenge-200bs ngento elula ukuyivuselela kwaye uyinikwe kwiphepha eliphambili le-samsung ilizwe lakho ,,, ithamsanqa xD
IINKCUKACHA 87 sitsho
CHAMO, NDENZE NGAYO NGEPHEPHA LE-SAMSUMG VENEZUELA NDAYENZA YONKE INTO KODWA EKUGQIBELENI KWISINYATHELO SOKUGQIBELA M ISIPHOSO SIPHUMELELE KANGAPHAMBILI ,, BENDINGAZI INDLELA YOKUYILUNGISELELA NGENXA YOKUBA NDANDITHATHILE NGENXA YAMAXESHA AMAXESHA KUNYE NOTHO ,,, = (HAHA NO BODY M HELP… KE KUFUNEKA NDIQALE UKUYIQALISA KANYE .. Q OKUNGAKUMBI, NDIZAKULINDA Kude KUKHO UMNTU ONGANDIKHOKELELA KULO MFAZELO Q NDIPHUMELELE UKUGQIBELA
Mhlobo wam sele ndingene kwelaphepha ndavula apho kuthiwa hlaziya kodwa ndingumTshayina kuba andazi ukuba ndenzeni kwaye kukho ibhokisi kodwa ayichazi nto, ndicela undincede.
Molo! Ndivuselela i-spica yam kwaye xa iphinde yaqala kwakhona yajinga ne logo ye-samsung kunye ne-bar phantsi sele ilayishiwe kwaye ayenzi nto! Nceda!!
iintyatyambo zelinen sitsho
Molo, ndine samsumg spica 5700 kwaye andiva bantu xa benditsalela umnxeba.Ukuba kukho umntu owaziyo ukuba ndingayenza njani, ndiza kubabulela ngayo, iintyatyambo zeflakisi ezivela eVenezuela, enkosi.
Phendula iintyatyambo zeflakisi
Kulungile, ndiyazi ukuba ayinanto yakwenza kodwa ndenze ukhetho lokufumana nge-imeyile iimpendulo kunye nezimvo zengxaki yam yokuhlaziya i-galaxy spica endiyibeke kule forum, ngoku ifowuni iye yaphuka kwaye andisayidingi ungafumani enye into, ungayenza njani ukuba ingasebenzi ???????????? Andazi ukuba ndingayifumana njani kwiwebhu… ..
molo ndine-samsung jonga II inokuziswa ku-2.1 ==== ???? Ndiyabulela kwangoko
NGALOMZUZU NDENZA UHLAZIYO .. KULULA KODWA AKUKHO PHANTSI KWAZO ZONKE IZIPHOSO ...
I-PC yiWindosw 7, kwaye bacebisa ukuba uhlaziyo lube kwi-XP .. Ukuza kuthi ga ngoku yonke into eqhelekileyo .. Ndiyakuxwayisa ukuba ihambe njani .. Ifowuni yam yiGT-i5700l .. IGlass Spica.
Ngaba ukhona umntu onokuqinisekisa ukuba sele bewulungisile umba wohlaziyo apha eSpain? Ngaba ukhona umntu o-orenji okanye u-Yoigo ohlaziye kutshanje?
Ayindivumeli ukuba nditsho k akukho mfuneko yokuyihlaziya kodwa sk ayizukundivumela ndikhuphele i-whatsaap.
Imvelaphi ye17 sitsho
Ndisandula ukuvuselela i-sansung GT-i5700 yam kwaye ibilungile kwaye sele ndikhuphela into yonke into ekhawulezayo kakhulu yeVenezuela kwiphepha le-sansung.com.ve.
Mholo. Ndisuka eVenezuela kwaye khange ndikwazi ukuhlaziya umnyele wam. Ungandixelela ukuba yeyiphi iwebhusayithi oyikhuphele yona ipc entsha. Akukho nenye yeepps endizikhuphelileyo eyamkela iselfowuni. Okanye undixelele ukuba akukho manyathelo ongezelelweyo ekufuneka ethathiwe. Sugeisy@gmail.com yiposi yam. Nceda undincede….
Ngaba uyihlaziyile njengoko isitsho apha? Ndingathanda ukuyivuselela ukuze ndisebenzise whatsapp nalapho
Kuyamangalisa, yonke into ukufezekisa. Ndiyabulela kakhulu.
Nawuphi na umntu ovela e-Orenji osele ekwazile ukuyihlaziya ngokusemthethweni?
Ndine Simyo kwaye akukho nasinye isicelo esaziwayo kwifowuni yam.
UFran 546 sitsho
Hayi ndifumana ukuba isixhobo asihambelani ... Ndine-spica GT-i5700 okanye ifowuni ayamkeli isoftware endinokuyenza !!! = ??
Phendula uFran 546
Molo ,, ndiyicime yonke into ,, ndenze yonke into kwaye xa ndibeka uhlaziyo lwenkqubo i-samsung new pc indixelela "ayinakuxhuma kwinkonzo", andazi ukuba ndenza into engeyiyo I oq ,, enkosi ... into endiyenzayo kwaye nceda uphendule
molo, xa ndizama ukuyihlaziya indixelela ukuba uhlaziyo aludingeki ... nceda nceda
jonga xa uhlaziyo lwabafowunelwa lususiwe
Ndiyalwa "Venezuela" sitsho
Molweni nonke, olu hlaziyo lusemthethweni kwipica endiyenzileyo amatyeli amahlanu kwaye ikhuselekile nge-100%, khuphela iinkqubo ezincinci kunye nohlaziyo lwesoftware yefowuni…. Igumbi njlnjl., libanika ukuba baphande okanye bakope amaxabiso wenethiwekhi yelizwe ngalinye kunye nenkampani yemfonomfono kuthungelwano lwedatha apho baya kusebenzisa khona ii-spikes zabo ..
Phendula uLucho "Venezuela"
Ngolo pelo ngokuqinisekileyo lukhuselekile!
Kuqala ndikhuphele uhlaziyo kwaye xa iseli iphinde yaqala phantsi yahlala kwi-logo yokuqala "i-Samsung" kwaye njengoko inkqubo ye-PC STUDIO iscreen ithe ayinqamki ndiyishiye ngoluhlobo ngaphezulu kweeyure ezi-2 ekugqibeleni ndadikwa kukulinda Thatha ithuba. Ndiyinqamle kwaye ndiyidibanise kwakhona kwaye yandinika i-1st ERROR (Ukusilela ukufaka uhlaziyo) ndinike iwindow ebonakala "buyisela" ndaphinda ndazama kwakhona kwaye ngaphantsi kwe-10 min yayisele ihlaziyiwe! 😀
Ungandinceda nceda kuba nge-1.3 ayikhupheli okanye ayiyiqondi, iselfowuni ithi ayibhaliswanga, kwaye i-1.5 ithi akukho zihlaziyo, ungandinceda nceda ndiyaphambana
I-Tecnologiaglobal Gl sitsho
Indlela endichaza ngayo ukuba ikhuselekile, kufuneka babe ne-samsumg pc studio kodwa bangayisebenzisi, bavale ukubekwa kweliso kule nkqubo kwaye ayisebenzi xa ifowuni iqhagamshelwe ……. yonke enye into kunye neOdin Multi Downloader, ngale nto uhlaziyo aluyi kuthatha ngaphezulu kwemizuzu emi-5…. idibanisa neWindows 7
Phendula kwi-Tecnologiaglobal Gl
Nceda undincede kuba ithi kufuneka ndikhuphele i-pc studio 1.3 entsha kwaye ayindiboni kwaye kwi-1.5 indixelela ukuba akukho hlaziyo, ungandinceda?
Ayisebenzi nam, ibonakala ifana ... isixhobo sakho asibhaliswanga okanye into enjalo ... = /
Ndinengxaki, i-Samsung yam ihlaziyiwe kodwa ndenze utshintsho kwi-chip kwaye i-SIM ayindiboni ngoku, ndenza njani ukuba ifowuni isebenze?
Uyihlaziye njani ????
UNic Contreras sitsho
Ubusuku obuhle, ndihlaziya njani i-Samsung Galaxy Gti-7500 ukusuka kwinkqubo yokusebenza 1.5 ukuya ku-2.1?
Phendula uNic Contreras
Jonga, ndine-galaxi spica, ndiyinike ukuseta kwakhona kumzi-mveliso kwaye yabanda, ayidluli kwiscreen sasekhaya njengoko ndisenza kwakhona.
ukuba unesisombululo thumela kum psanzhn@yahoo.com
Ndine spica i5700 kwaye ukuchukumisa akusebenzi, kutheni kunjalo?
Andikwazi ukuyihlaziya, xa isiya kuhlaziywa ihlala kwi-0% kwaye emva koko umyalezo othi "ukusilela ukufaka uhlaziyo" uyavela kwaye sele ndizamile ukwenza ukuseta kwakhona okunzima kodwa kuyafana, andikwazi ukukuhlaziya 🙁
Putooo ungandixeleli nantoni na pussy
Mnu lisa james sitsho
Ngaba ufuna imali-mboleko ukuze uhlawule amatyala akho okanye uqale ishishini lakho? ukuba kunjalo nceda usithumelele i-imeyile namhlanje kwi: transferfunds00@hotmail.com ngolwazi oluthe kratya
Phendula Mnu Lisa james
Eli nqaku lihle!
Ngaba uyafuna ukwazi indlela yokufaka I-Whatsapp ye-Samsung Galaxy Lite GT-i5700L?, Baza kothuka.